crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> December | 2017 | HimiloNetwork
Zakariya December 6, 2017	Leave a comment 768 Views
Muqdisho – Madaxweyne Cali Cabdalla Saalax oo Isniintii ay soo af-jarantay noloshiisa adduunyo, waxa uu ahaa 75 jir 21 Marso 1942 ku dhashay tuulada Baytul Al-ahmar oo hoos timaada deegaanka Sanxaan ee Gobolka Sancaa. Waxa uu ka dhashay qoys sabool ah, waxa uu ku soo barbaaray nolol halgan ku dhisan ka ddib markii isagoo da’yar kala tageen waalidiintiisa. Bilawgii noloshiisa ...
Zakariya December 5, 2017	Leave a comment 462 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maalinta Caalamiga ee Nabadda waxaa sanadle loo qabtaa 21-ka bisha September si loo garowsado dadaallada shaqsiyaadka, ururrada iyo dowladaha ay ku dhameynayaan colaadaha kuna soo dabaalayaan nabadda. Shibirta ayaa u ah astaan lala xiriiriyo Maalinta Caalamiga ee Nabadda. Hal-ku-dhegga Maalintan ee sanadkii 2016-ka, hiigsiga joogteynta horumarrada ahdaafta fog: iyo gogol u xaarista nabadda. Si shumaca loogu shido ...
Zakariya December 5, 2017	Leave a comment 333 Views
Muqdisho – Ugaarsade ayaa dhaawac waxaa kasoo gaaray toogasho aan loo meel dayin oo ey u geystay, marka loo eego booliska Lowa. Waaxda Ilaha Dabiiciga ee Lowa ayaa sheegay in saraakiisha goobta ay ka war-caliyeen kadib kolkii dhaawac uu ka dhashay toogasho uu sameeyey ey kamid ah ilaalada. William Rancourt, oo 36 jir ah, wuxuu ugaaranayay shinbiro isaga oo saddex ...
Zakariya December 5, 2017	Leave a comment 237 Views
Muqdisho – Nin jeclaa inuu sawir selfie ah isaga oo gacanta ku heysta bamboo ayaa dhintay markii uu ku qarxay wajigiisa, marka loo eego booliska Ruushka. Booliska Labinsk ayaa sheegay in 26-jir lagu magacaabo Alexander Sasha Chechik uu u dhintay falkan. Waqti kahor intuusan qarxin, wuxuu ku fariistay gaarigiisa, isaga oo bamboo nool gacanta ka heysta. Wuxuuna markaas kadib ganta ...
Zakariya December 5, 2017	Leave a comment 312 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Ninka ayaa heerkii ugu xumaa ka gaaray maseyrka markii afadiisa uu ku jirdilay mar kasta oo sawirkeeda like la saaro, marka loo eego booliska Paraguay. Booliska Nemby ayaa sheegay inay xireen 32-jir-ka lagu magacaabo Pedro Heriberto Galeano kaas oo lagu eedeeyey inuu guriga ku dhex xirtay afadiisa kadibna bilaabay inuu jirdilo muddooyinka bilo ah. Galeano ayaa lagu eedeeyey ...
Zakariya December 5, 2017	Leave a comment 397 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maalinta Caalamiga Hijaabka waa dhacdo sanadle ah oo maskaxdeeda ay ka timid Nazma Khan sanadkii 2013-ka. Munaasabadda ayaa la qabtaa kowda bisha febraayo sanad kasta. Waxaana la xusaa 140 dal oo dunida kamid ah. Ujeedka maalintan waa dhiirri-gelinta haweenka kala diimaha iyo taariikhda leh inay xirtaan ama bartaan Xijaabka. Abaabulayaasha dhacdadan waxay ku qeexaan fursad dadka aan ...
Zakariya December 5, 2017	Leave a comment 464 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Waxaynu nool nahay qarniga 21aad oo mid iyo qof kasta uu xor u yahay inuu sameeyo wuxuu ka helo; u dhaqmo suu doono; u noolaado suu doorbidayo. Waxaynu ka hadalnaa xurnimo hayeeshe dhab ahaan, dhamaan dadku ma wada ahan xor. Adoonsigii waa la xabisay; wuxuuna ka noqday xaq-daro aduunka oo dhan, hase ahaatee, dadku wali waxay adoon ...
Zakariya December 3, 2017	Leave a comment 444 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Xuska sanadlaha ah ee Maalinta Caalamiga ee Naafada waxaa sanadkii 1992-kii asteysay QM. Ujeedku waa ilaalinta xuquuqda iyo bad-qabsanaanta dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay ee ku jira dhammaan bulshooyinka iyo in sare loo dhigo wacyiga la xiriira xaaladaha ay ku nool yihiin dhan walba – siyaad ahaan, dhaqan ahaan iyo bulsho ahaan. Kadib dadaallo qaatay sanado badan ...
Zakariya December 2, 2017	Leave a comment 1,216 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Babaaygu wuxuu ku jiraa qudaarta ama cunnooyinka aadka loo jecel yahay oo maalinle inta badan bulshadu u cuni karto. Wuxuu kamid yahay qudaarta kuwa ugu raqiisan, qiimo ahaan, uguna qaalisan, nafaqo ahaan. Dadka intooda badan waxay cunaan xilliyo kala duwan. Qaar ayaa doorbida inay subaxi cunaan, walow Soomaalidu aysan u badneyn. Halka inteenna badanna aan xilliga qadada ...
Zakariya December 2, 2017	Leave a comment 2,221 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Canabku wuxuu kamid yahay qudaarta aadka u macaan oo dunida meelo badan laga cuno. Dad badan waxaa laga yaabaa inay kaliya macaankeeda ka helaan, hayeeshe aysan ogeyn faa’iidada ku duugan cunisteed. Haddaba waxaan kuu sheegi karnaa dhowr faa’iido oo cunista Canabka laga helo. Waxay daweysaa Neefta. Waxay xoojiyaan lafaha. Waxay kahor-tagaan cudurrada ku dhaca wadnaha. Waxay tiraan ...
Markay Madaxdeennu Dhageysiga ka doorbidaan Qoraalka.